Ukunakekelwa kwesikhumba nsuku zonke ngemuva kwe-30
Wonke owesifazane kufanele azi ukuthi ngemva kweminyaka engu-30, isikhumba sobuso sidinga ukunakekelwa nsuku zonke. Futhi kufanele futhi bazi ukuthi bangenza kanjani, ukuthi isikhumba sobuso ngaso sonke isikhathi sihlale sinhle futhi sincane.
Uma owesifazane oneminyaka engama-30 usazizwa esemncane, ejabule futhi enamandla kakhulu, naphezu kokuthi ubusha bakhe busuvele budlulile. Futhi wonke owesifazane ufuna ukubukeka kwakhe kubonakalise isimo sakhe sengqondo sangaphakathi. Kulesi sihloko, sizokutshela indlela yokunakekela isikhumba sakho ngokucophelela nangasemuva emva kweminyaka engu-30.
Kufanele wazi ngama-hormone adlala indima ebalulekile empilweni yethu nokuthi kubaluleke kangakanani ebuhleni besikhumba sethu. Uyazi ukuthi kuyo yonke impilo yomfazi kukhona inqubo ye-hormonal, ngenxa yalezi zinguquko singabheka kangcono futhi kuncane kunamadoda ethu kule minyaka.
Nokho, ama-hormone wesifazane ahlobene eduze nombuso wangaphakathi nabangaphandle wabesifazane. Kule minyaka, kufanele uqaphe ukudla kwakho, impilo yakho futhi uma unenkinga, konke lokhu kuthinta ngokushesha isimo sesikhumba sakho. Eminyakeni engama-30, umsebenzi wesimiso wesifazane wehlisa umzimba, futhi isikhumba siba sibi nakakhulu. Ukuze ugweme lokhu, kumele wengeze ama-hormone.
Akufanele ufake ama-hormone ngama-hormone, ngoba uma uqala ukuwasebenzisa, isikhumba sakho sijwayele ngokushesha futhi ngemva kwalokho, awukwazi ukukwenza ngaphandle kwabo, kuyakwenza. Futhi uma uyeka ukuwasebenzisa, khona-ke uqala ukuqhuma imibimbi. Ngakho-ke, engeza ekudleni kwakho ama-hormone amahle kakhulu emvelaphi yezitshalo. Zigcinwa ngobuningi emikhiqizweni enjengokhilimu, amagilebhisi, igromegranate, ngenxa yale mikhiqizo ekudleni kwakho, ungathola ama-phytohormones.
Futhi, okuqukethwe okuphezulu kwe-phytohormones kuqukethe ama-hoes, ungabathenga kuma-pharmacy. Ungawaphuza njengetiye noma usike ngokucophelela ku-grinder yekhofi bese ufaka isigamu sesipuni se-isipuni salesi powder ukuze ubhekane namaski. Kuzoba usizo kakhulu ukwenza nsuku zonke ubuso bombuso kusuka kumnqumo, ubisi, amafutha ommbila. Lawa mafutha anenombolo enkulu ye-phytoestrogens.
Wonke umuntu wesifazane kule minyaka kufanele azi lokho anakho, omdala akutholayo, ama-radicals amaningi mahhala avela emzimbeni. Lapho beba ngaphezulu, isikhumba sibhekene nabesifazane kule minyaka. Ukuze unqobe futhi ugcine isikhumba sethu sincane futhi siphephile, udinga ukuphuza itiye eluhlaza nsuku zonke, sikwazi ukususa ama-radicals emzimbeni.
Uma usuvele usuleminyaka engama-30 ubudala, kufanele wazi ukuthi kule minyaka, isikhumba sombuso sinesidingo sokunyusa kwansuku zonke. Njengoba uhlaka lwe-lipid lwesikhumba luba mncane futhi isikhumba siphume ngokushesha kakhulu kunasebusheni. Ngokuvamile ubhekana namaski uphuze usuku 2 amalitha amanzi ahlanzekile. Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwe-moisturizer nakho kuhle kuwe. Njengoba izazi zeluleka, gwema ukusetshenziswa kwezimonyo njalo. Gwema ukusetshenziswa kwezinto zokuhlanza kanye nokuhlanza isikhumba, nokuqukethwe kwama-surfactants.
Wonke owesifazane kufanele azi ngokubaluleka kokuzikhumbuza umzimba. Noma yiluphi uhlobo lwezinto eziphilayo lunikeza wonke amandla alo ezingxenyeni zangaphakathi. Futhi uma izinkinga zakho zempilo nokuzivikela okubuthakathaka, awukwazi ukubheka omncane futhi omuhle. Ukuze uthuthukise ingculazi futhi uthuthukise ithoni, kufanele uchithe amanzi aphuze nsuku zonke noma wenze ishaja ehlukile. Futhi kuyasiza kakhulu ubuhle besikhumba sakho nempilo yomzimba wakho, ukuzivocavoca nsuku zonke. Futhi uthathe izithako ezivela empandeni ye-ginseng, i-echinacea, i-eleutherococcus.
Ukunakekelwa kobuso kwansuku zonke emva kweminyaka engu-30, kuzokwazi ukugcina ubusha nobuhle besikhumba sakho.
Indlela yokwenza i-peeling ekhaya
Yeka masinyane ukubeka umyalelo ukuze umuntu futhi ukuthi kubiza kangakanani
Indlela yokudonsa ngokuqondile amashiya
Ukuvuselelwa kokubukeka okungenasiphakamiso
Indlela yokukhetha izitebhisi ezifanele zokufaneleka
Indlela yokukhetha nokuhlobisa umuthi?
Amakhukhi we-almond nama-cream
I-Aromatherapy iyinamandla wamafutha abalulekile
Ukudla kokujikeleza kwesifazane
U-Xenia Borodina uphawule ngezindaba zokuzalwa kwengane
Izindlela zemvelo zokwelashwa kwe-syndrome engenamaphiko (ingxenye 1)
Ukufunda ukwenza i-manicure ye-gradient nge-sponge
U-Lady Gaga uzama ukulahlekelwa isisindo kumshado wakhe
Amakhukhi okushokoledi ngekhilimu omuncu
Izinto ezingu-25 zokuzama ngocansi
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo we-painite
Izinhlobo zobuningi bezingane
Izimbangela zokulahleka kwezinwele
Yimaphi abesifazane abathanda amadoda ahlukahlukene ezibonakaliso zezinkanyezi: Psychology of the horoscope
Indlela yokuqeda ukubunzima kokungabaza